अंकल जीवराज जसको जीवन नै चितवन पोष्ट बन्यो | चितवन पोष्ट
अंकल जीवराज जसको जीवन नै चितवन पोष्ट बन्यो
यस चितवन पोष्ट दैनिकका प्रबन्ध सम्पादक जीवराज अर्यालको असामयिक निधन भएको आज १३औँ दिन भएको छ । यस पुण्यतिथिमा उहाँको मृतात्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै श्रद्धाका अञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु । नाताले उहाँ मेरो काका अर्थात् मेरा पिता संस्थापक सम्पादक स्व. धर्मराज अर्यालको भाइ । बुबाको आकस्मिक निधनले रूझेका यी आँखाहरु ओभानो हुन नपाउँदै फेरि काकाको निधनले चोटमाथि चोट थपिदियो । पारिवारिक सदस्य भएकोले उहाँसँग व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्झनाहरु अनगिन्ती हुने नै भए । यो लेखमा चाहिँ चितवन पोष्टसँग सम्बन्धित केही सम्झनाहरु मात्र राख्न चाहन्छु । म आफूले पनि जीवनका केही वर्षहरु यसै पत्रिकाका लागि समर्पित गरेको र आजका दिनसम्म पनि सक्रियरुपमा जोडिएकै हिसाबले उहाँसँगका केही संस्मरणहरु राख्ने जमर्को गरेको छु ।
चितवन पोष्ट साप्ताहिक हुँदादेखि नै अंकल जीवराज यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । दैनिक हुने समयमा भने उहाँ मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुमा क्यानेडियन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सिंचाइ परियोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लामो समय महेन्द्रनगरको महाकाली सिंचाइ परियोजनामा काम गर्नुभएकोले यस क्षेत्रमा उहाँको विशेषज्ञता रहेको थियो । माओवादी जनयुद्धको बेला भएकोले दिनहुँ माओवादी–सेनाबीच भिडन्तहरु हुने क्रम बढ्दै गएपछि उहाँलाई काम छोडूँ कि गरुँ जस्तो स्थिति थियो । छोडूँ निकै आकर्षक सेवासुविधा थियो, गरुँ आफू र घरपरिवारलाई सधैँ चिन्ता हुने । चितवन पोष्टको सुरूवाती चरण भएकोले टिम सानो र धेरै नै गाह्रो अवस्था थियो । त्यतिखेर विज्ञापन र वितरण दाइ प्रकाश, म र पूर्वी चितवनबाट केशव भट्टराईले हेथ्र्यौं । पत्रिकामै धेरै समय खर्च गर्नुपर्दा त्यतिखेर हाम्रो पढाइ पनि राम्रोसँग हुन पाएको थिएन । त्यसपछि हामीले अंकललाई चितवन पोष्टमा आउन अनुरोध ग¥यौँ । हाम्रो पढाइमा असर गरेको कुरालाई बढाइचढाइ गरेर भए पनि उहाँलाई चितवन पोष्टमा आउन राजी गरायौँ ।
चितवन पोष्टका लागि उहाँले दिनरात नभनी काम गर्नुभयो र यसलाई स्थापित गर्ने एकमात्र लक्ष्य बनाउनुभयो । बिहान ६–७ बजेदेखि उहाँ ग्राहक विस्तार, विज्ञापनमा लागिपर्नुहुन्थ्यो । पूर्वी चितवनको वीरेन्द्रनगर घरमा पुग्दा रातिको सधैँ ८–९ बज्थ्यो, बिहान ६ बजे नै हिँड्नुहुन्थ्यो । सायद् बिहानको खाना घरमा बिरलै खानुभयो । घरपरिवारको सधैँ उहाँप्रति यही गुनासो थियो । हामीले धेरैचोटि भन्यौँ– ‘कम्तीमा बेलुका ६–७ बजे घर जानोस्, बिहान खाना खाएर आउनोस्’, तर कहिल्यै मान्नुभएन । बिहानैदेखि काम गर्ने भएकोले दिउँसो थाक्नुहुन्थ्यो र १–२ घन्टा अफिसमै आराम गर्नुहुन्थ्यो । एक किसिमको हुटहुटी थियो उहाँमा पत्रिकाका लागि । पत्रिकालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने मात्र थियो उहाँलाई । तलबलगायत सबै खर्च जुटेपछि मात्र बुबा र अंकलले तलब लिनुहुन्थ्यो । २०६१ सालसम्म पत्रिकाका लागि निकै गाह्रो अवस्था रह्यो । अंकलको बजारमा राम्रो सम्बन्ध थियो । कहिलेकाहीँ तलबलगायतका खर्च नपुग्दा साथीभाइ, व्यवसायीहरुसँग पैसा सापट लिनुहुन्थ्यो । बचनको एकदमै पक्का हुनुहुन्थ्यो । एक हिसाबले उहाँ पत्रिकामा आउनुभएदेखि निधन हुनुभन्दा तीन दिनअघिसम्म करिब दुई दशक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण पक्ष उहाँले नै कुशलतापूर्वक सम्हाल्नुभयो ।
स्थानीय तह र बजेट तर्जुमा गरिने आधार
नेपाली शुद्धीकरण र मातृभाषा रक्षा : भाषिक आन्दोलन – १
ग्राहक विस्तारलाई जीवराज अंकलले रूटिनजस्तो बनाउनुभएको थियो । नियमित ग्राहक नभईकन पत्रिका अघि बढ्दैन भनेर यसमा आफैँ लागिपर्नुभयो । बिहानै ६–७ बजे ‘अंकल, कहाँ हुनुहुन्छ ?’ भनेर फोन गर्दा कहिले पर्सामा, कहिले नारायणगढमा ग्राहक विस्तारमा छु भन्नुहुन्थ्यो । धेरैचोटि म उहाँसँग गएको छु पनि । यही देखेर होला, हामीलाई पनि पत्रिका वितरण गर्न कहिल्यै धक लागेन । करिब तीन महिना म आफैँले नारायणगढमा पत्रिका बाँडे । कहिलेकाहीँ आपतविपत् पर्दा उहाँ आफैँले पत्रिका बाँड्नुहुन्थ्यो, उहाँले नसक्ने भएपछि मात्र हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको यस्तो किसिमको लगावले हामीलाई सधैँ नै उत्प्रेरणा दिइरह्यो, कठिन अवस्थामा पनि उत्साह थपिरह्यो । ‘आज फलानो वितरक बिरामी भयो, म बाहिर छु तैँले बाँड्दे’ भन्नुहुन्थ्यो । पत्रिका विस्तार हुँदै गएपछि धेरै वितरकहरु थपिए । त्यसपछि एक–दुई जना अतिरिक्त वितरकसमेत राख्ने निर्णय ग¥यौँ ।
त्यतिखेर स्थानीय पत्रिकालाई ग्राहक शुल्क तिर्ने चलन थिएन । अरु सबै लगभग निःशुल्क नै बाँडिन्थे । चितवन पोष्टको सर्कुलेसन सुरू भएदेखि नै अरु पत्रिकाभन्दा धेरै माथि भएकोले लागत खर्चको हिसाबले यो सम्भव थिएन भने निःशुल्क दिँदा मह¤व घट्ने कुरामा पनि हामी विशेष सचेत थियौँ । तर, नयाँ ट्रेन्ड सुरू गर्नु सजिलो कुरा थिएन । यसको नेतृत्व अंकलले नै लिनुभयो । टाँडीमा केशव भट्टराई, नारायणगढमा जीवलाल पौडेललगायत हामीले एक–दुई ठाउँमा ग¥यौँ, तर अधिकांश ठाउँमा अंकल आफैँले बिलबुक बोकेर मासिक शुल्क उठाउन हिँड्नुभयो । ‘चितवन पोष्टलाई मात्र किन ग्राहक शुल्क तिर्ने ?’ करिब २० वर्षअघि यो प्रश्नको उत्तर पक्कै सजिलो थिएन । सुरूमा पाठकलाई नियमित पत्रिका प्रकाशन हुन्छ र गुणस्तरीय पनि हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास थिएन । यी कुरामा पाठकको मन जित्दै गएपछि स्थिति सामान्य हुँदै गयो र एकहिसाबले स्थानीय पत्रिकाको नियमित शुल्क तिर्नुपर्ने मानसिकता स्थापित भयो पनि ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशैभर व्यापारिक चहलपहल बढ्न थाल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चितवन पोष्टलाई पनि पुग्यो । वितरण झन् व्यापक भयो भने विज्ञापन पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि पत्रिका व्यावसायिकरुपले फाइदामा जान थाल्यो । पत्रिकाको स्रोत बढेसँगै आफ्नै छापाखाना ल्याउने, ठूलो आकारमा जाने, चितवन र नवलपरासी मात्र होइन हेटौँडा, धादिङ, गोर्खालगायतका जिल्लामा पत्रिका पु¥याउने कुरामा उहाँले अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो । बजारअनुसार विज्ञापन दररेट राख्न उहाँ सिपालु हुनुहुन्थ्यो । अरु पत्रिकाहरुभन्दा विज्ञापनको दर बढी भयो भन्नेलाई उहाँ पत्रिकाको पहुँच र विज्ञापनको सम्भावित प्रभावको बारेमा बुझाउनुहुन्थ्यो ।
त्यतिमात्र होइन विज्ञापनको असर कस्तो छ, टार्गेट हासिल भयो कि भएन भनेर विज्ञापनदाताहरुलाई बेलाबेलामा सोधिरहनुहुन्थ्यो । विज्ञापनदाताबाट राम्रो उत्तर पाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो । ‘विज्ञापनदातालाई विज्ञापनबाट फाइदा हुनुपर्छ नभए विज्ञापन दिगो हुँदैन’ भन्नुहुन्थ्यो । खर्च गरेर भए पनि पत्रिकाको छपाइ गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन । रंगीन हुनुभन्दाअघि मासिक ५०–६० हजार अतिरिक्त खर्च गरेर फोटो राम्रो आउने प्रविधिको प्रयोगको सुरूवात गर्नुभएको थियो र वर्षौैंसम्म यो कायम रह्यो । क्षेत्रीय दैनिकका लागि यो ठूलो खर्च थियो ।
चितवनमा चितवन पोष्टपछि धेरै दैनिक पत्रिकाहरु सञ्चालनमा आए । ठूला पुँजीका दैनिकहरु पनि दीर्घकालीन हुन सकेनन् । तर, चितवन पोष्ट अभावबाट सुरू भएको भए पनि लगातार दुई दशकसम्म एकदिन पनि आर्थिक कारणले बन्द हुनुपरेन । सायद् दिनरात नभनी लागिपर्ने उहाँजस्तो समर्पित व्यक्ति र एकदमै लगनशील टिम नै यसको कारण थियो ।
विगत एक–दुई वर्षदेखि भने अंकल अल्लि थाक्नुभएको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो । ‘पिएचडी गरिहाल्यौ, तिमीहरु अब नेपाल फर्क, र पत्रिकामा पनि केही समय देऔ’, भन्नुहुन्थ्यो । दाइ प्रकाशले बेलायतबाट, मैले न्युजिल्यान्डबाट, र उहाँका कान्छा छोरा भाइ आनन्दले अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी गरेकोमा उहाँलाई निकै गर्व थियो । हाम्रो आआफ्नै करियर छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तर हामी तीनैजनाले चितवन पोष्टमा काम गरिसकेको, अहिले पनि प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा यसमा सक्रिय नै रहेकोले हामीहरु आइदिए पत्रिका अझ राम्रोे गर्न सकिने उहाँको विश्वास थियो । म भन्थेँ– ‘पत्रिकामा सबै कुरा ठीक छ, राम्रो टिम छ । यसका लागि हामीले पनि रगत–पसिना बगाएका छौँ । अहिले पनि मह¤वपूर्ण निर्णयमा सहभागी भएकै छौँ, अनुगमन गरिरहेकै हुन्छौँ, पत्रिकामा समस्या आयो भने तपाईंले भन्नै पर्दैन, सबै कुरा छोडेर हामी आउँछौँ ।’ यसो भन्दा उहाँको मुहार निकै उज्यालो हुन्थ्यो । वास्तवमा यो हाम्रो मनको कुरा हो पनि ।
उच्च अध्ययन र जागिरको क्रममा विगत झन्डै एक दशक विदेशमै रहे पनि पत्रिकाको मह¤वपूर्ण निर्णयहरुबारे सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय बुबा र अंकलको रंगीन प्रेस ल्याउने निर्णयमा भने हाम्रो असहमति थियो । उत्पादन खर्च निकै बढ्ने हुनाले यो ठूलो खतरा हुने हाम्रो ठहर थियो र त्यसैले गर्दा झन्डै एक वर्ष ढिलाइ पनि भयो । मेसिनबारे जर्मनी, चीनमा बुझ्ने भनेर हामीले नियतवश अल्झाइरह्यौँ । पहिलोपटक चितवन पोष्टसँग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो राय अस्वीकृत भयो । बुबा र अंकल दुवैले भन्नुभयो– ‘हाम्रो अन्तिम इच्छा नै यही हो ।’ रंगीन भएपछि खर्च बढ्यो, तर आम्दानी पनि बढ्यो र पत्रिकाको छवि पनि । उहाँहरु दुवैले पत्रिकासँग सम्बन्धित अन्तिम इच्छा पूरा गर्नुभयो र सन्तुष्ट देखिनुहुन्थ्यो पनि । यस मानेमा भने मलाई ज्यादै नै खुसी लाग्छ । पत्रिका रंगीन भएको छ महिनामा बुबा बित्नुभयो भने १५ महिनामा अंकल । सायद् रंगीनको हतारो यसैले गर्दा भएको थियो होला जस्तो लाग्छ ।
विदेशबाट हरेकचोटि म घर आइपुगेको एक घन्टासम्म पनि मैले फोन गरिनँ भने उहाँले नै फोन गरेर झपार्नुहुन्थ्यो, आएपछि फोन गर्नुपर्दैन ? भनेर । ‘अफिस कहिले आउँछस् ?’, उहाँको दोस्रो प्रश्न हुन्थ्यो । उहाँ सधैँ पत्रिकाको प्रगति सुनाउन व्यग्र देखिनुहुन्थ्यो र एक सासमा सबै सुनाउनुहुन्थ्यो । त्यससँगै उहाँको मह¤वाकांक्षी योजनाहरु पनि बेलीविस्तार लगाउनुहुन्थ्यो । ‘देखिस्, अंकल इज अंकल’, यी सब सुनाउँदै गर्दा प्रायः यसै भन्नुहुन्थ्यो । अब यी सब कुराहरु सम्झनामा मात्र सीमित रहे । अंकल, तपाईंले ठीक भन्नुहुन्थ्यो, चितवन पोष्टका लागि तपाईंको योगदान अतुलनीय छ । साँच्चै नै ‘अंकल वाज अंकल’, यो कुरा मनबाट कदापि मेटिने छैन ।
(लेखक बेलायतमा स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कार्यरत छन् ।)